IBlokchain neBitcoin isetyenziselwe uLawulo loMhlaba-iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/I-Blockchain ne-Bitcoin isetyenziswe kuLawulo lweMhlaba
Kwinkongolo yetekhnoloji yolwazi ndaye ndaya kumhleli wephephancwadi, wandibuza malunga nokusetyenziswa kolu hlobo lwetekhnoloji kwindawo yoBhaliso lwePropathi, iCadastre kunye noLawulo lwePropathi ngokubanzi. Incoko ibinomdla ngakumbi, nangona bendimangalisiwe ukuba andibuze, ndicinga ukuba kwiinyanga ezimbalwa kwiphephancwadi lakhe bebepapashe malunga nelizwe kwiitropiki zaseMelika ebezisebenzisa. Ndacinga ukuba yinto nje epapashiweyo, apho ithuba lokucela iinkcukacha ezithe kratya kumthombo wokuqala laliphosakele.
Inyani yile yokuba ubungakanani bentsholongwane ye-acronyms #blockchain kunye #bitcoin ayisiyonto imangalisayo, kungekuphela ngenxa yokuba benabakhuthazi abakhulu kumacandelo ohlukeneyo othungelwano lwentlalo, kodwa ngenxa yokuba kungenakuphinda kuguqulwe ukudibanisa ifilosofi yezi teknoloji kwixesha elizayo kufutshane nentengiselwano phakathi kwabantu besithathu. Ndishwankathela kweli nqaku ezona nkampani ziphambili ezazishushu ngobo busuku baseAmaretos kwindawo yokutyela enomculo odlalayo ohamba emlanjeni.
I-Blockchain iteknoloji yokugcinwa kwedatha kwifu eliqinisekisiwe. Ietyunithi kunye neendowino zigcina imisebenzi ehambelana nento eyenziwe ekuqaleni, akunakukwazi ukuphula.
Ukusetyenziswa kwale teknoloji kwimicimbi yoLawulo loMhlaba, kuvumela ukubethelwa kwenkqubo yokuthengiselana kusetyenziswa iibhloko ezidityaniswe kwilifu. Kwimeko yobhaliso lwePropathi kunye noLuntu oluManyeneyo, ikhonkco alikho nje kuphela ngokulandelelana, kodwa zonke iinkcukacha ezibuthathaka zomsebenzi kwipropathi (ukuvavanywa, ukuphuculwa, ukuthengiswa, ukubambiswa kwemali, imilinganiselo, ukubambelela, ukubonwa, njl.njl. ilifu lokugcina ngokufihliweyo.
I-Bitcoin yitekhnoloji yokulawulwa kwemali ye-elektroniki phakathi kwabantu besithathu. Itekhnoloji iguqula ixabiso lemali kwintengiso esesikweni ibe yimali ye-cryptographic enokusetyenziselwa ukuthenga phakathi kwabantu besithathu ngamaxabiso aphantsi kunentengiso esesikweni. IiYunithi zeMali ziintlobo zotshintshiselwano zombane ezisebenzisa iibhlokhi zeBlockChain ngesiqinisekiso sokwenene.
Ukusetyenziswa kwale teknoloji kuLawulo loMhlaba kuthetha ukuguqulwa kwetayitile yepropathi kwiiyunithi zeNgqekembe, ukuze uyiguqulele ekubeni ngokhuseleko. Ngaphantsi kwezi meko, xa isihloko sibhalisiwe, sibhalwe ngokufihliweyo kusetyenziswa iBlockChain kwaye sakuba siguqulwe saba ngokhuseleko ngeBitcoin, sinokudluliselwa phakathi kwabantu besithathu ngaphandle kwesidingo sabalamli abaninzi.
Indawo yokutshaya okanye inyaniso?
Kukho ukudideka okuninzi kulo mbandela, kuba ukugqithisa kuthengisiwe ngaphezulu kweenkqubo ezihamba kancinci ezinokufikelelwa kwisithuba sexesha esingaxhomekeki kuphela kwimicimbi yetekhnoloji kodwa ngakumbi kwimigaqo-nkqubo nakwimithetho yezomthetho. Ke, emva kwe-Amareto yesibini, inyathelo lokuqala yayikukuvula iingqondo zethu kwaye sicinge ukuba kuya kwenzeka ntoni xa sicinga namhlanje kwiminyaka engama-25 ukusukela ngoku, ngelixa amantombazana awayehamba nathi engafikelelanga kumbindi wemargarita yawo yokuqala kwaye asibona kwakhona. ngobuso obunomdla ukuze angabonisi ukungazi ngokupheleleyo ii-clichés ezisetyenziselwa i-geofumados.
Esona sihloko silula ukusisebenzisa yiBlockchain njengetekhnoloji, kuthathelwa ingqalelo ukubanakho okunika inkqubo yokuthengiselana ukwandisa ukhuseleko lolwazi. Yinto efunwa ngumntu wonke, endaweni yokuba nedathabheyibhile enokuthi yaphulwe, bangaphakathi kwilifu apho kungenakwenzeka khona ukwakha ikhonkco kwizikhonkwane eziqulethwe kulandelelwano oluqhekekileyo olungenakwaphulwa kwaye kunzima nokuba qonda. Oku kunokusebenza kokubini kwiRegistri yePropati, apho iimeko zangoku zePropathi zibandakanyiwe kwityathanga: amaqela anomdla kwintengiselwano (umnini-notari, umvavanyi, ibhanki, njl. Njl. uxanduva), into yomthetho enokuba yinto ebonakalayo okanye engabalulekanga (njengepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda okanye ipropathi yorhwebo kwizabelo), ireferensi yayo yejiyometri kwaye nangaphezulu kwalo lonke iziko lemodeli ye-LADM, umthombo ... yonke into, ngokulandelelana kweebhloko ezingapheliyo kumtya ofana nomtya weDNA.
Awuyikutshaya, ukuba iteknoloji sele ikhona kwaye ibhalwe ngokusetyenziswa kwezinye iindawo.
Ewe kunjalo, iBlockchain yitekhnoloji kuphela, abakulungelanga ukusebenzisa izixhobo; Inkqubo kufuneka ihlale iphuhlisiwe okanye isetyenziswa kwinto esele ikho, ngemeko elula kwiinkcazo zobugcisa zesivumelwano esibonisa ukuba inkampani kufuneka isebenzise itekhnoloji yeBlockchain kwaye kunjalo, isikhundla sabasebenzi esiya kwenziwa yi-QA kwaye siya kwamkelwa -ubuncinane ukuqonda isiqingatha sendlela eyenziwe ngayo-.
Ingxaki kukuba inxenye yentengiso yale teknoloji kukukholelwa ukuba xa iBlockchain isetyenzisiwe, ingcali akusekho mfuneko yokwenza intengiselwano. Kodwa masisebenzise ingqondo evulekileyo, kwaye ucinge ngoku:
Yintoni eyenzekayo xa sihamba nekitikiti kwimali yendawo yelizwe lam, ilingana neerandi ze-10?
-Yam, ndingangena eteksini ndibhatale ngetikiti, ndingaya evenkileni ndithenge ikhadi lemizuzu kwifowuni yam ephathekayo. Kuxhomekeka ekubeni ndiphi isixeko endikuso, ndingathenga ikhadi lokuthenga ngetyala lePayPal okanye ndithumele imali ngeselula ngaphandle kokuba kufanelekile ukuqinisekisa ubunyani bayo.
Ukuba ngaphandle kweedola ze-100 zange zithengele ifowuni yeselula kwaye ezininzi kwivenkile ziya kuqinisekisa ukuba iyasebenza, ngomatshini owenziwe ukuqinisekisa ukuthembeka.
Kwiminyaka engama-5,000 XNUMX eyadlulayo oku kwakungeke kwenzeke ukuba ucinge, kuba ukutshintshiselana yayiyimpahla, ke xa utshintshisa ihashe ngesiqwenga kwakufuneka ukuba ube nengcali eyaziyo ngamahashe ukuqinisekisa ukuba ayisiyonto iphilileyo kuphela, kodwa ingcali ukubona iyelenqe kunye nesiqinisekiso sokuba wayesazi ukuba ootatomkhulu noomakhulu babengabanini, kwaye mhlawumbi enye ingcali ukubhala lo msebenzi kwincwadi.
Ukuthenga nokuthengisa namhlanje kungenziwa ngokulula, kuba imali yomzimba okanye yekhompyutheni yindlela yokuthengiselana phakathi kwamalungu esithathu onobungqina bokuba ubungqina buyakwazi ukuqinisekiswa kwaye luyamkeleka.
Kulapho ke xa iBitcoin ingena, kuba ipropathi iba ziiyunithi zexabiso, kanye njengokhuseleko. Namhlanje ndingathengisa umhlobo wam isatifikethi sokwabelana ngebhari nge- $ 2,000. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ubunyani angayenza, okanye angabamkela ngentembeko ukuba uyandazi kwaye uyazi ukuba angandifumana phi xa uxwebhu lunengxaki. Ke, itayitile, xa ibhalisiwe kwinkqubo efihliweyo, ekhuselweyo nesetyenziswa njengesiqhelo, ukuba idluliselwe phakathi kwabantu besithathu ngekhe ihlale nomlamli, ukuba umnini uyazi ukuba xa sele isezandleni zakhe kwaye angayidlulisela komnye ngaphezulu okanye uye kwibhanki ekhuphayo ukuyokuyifaka egameni lakho. Ewe kuvakala ngathi ngumsi, kodwa yile nto banokucinga ukuba ngubani othengise uMqolomba waseMacpela ku-Abraham kwiindonga zokugoba kuMlambo iJordani.
Ke, iBlockchain ngokwayo ayisiyonto ngaphandle kwetekhnoloji esebenzayo esele ikho, nazo zonke izibonelelo esinethemba lokuphuma kuzo. Uyazi ukuba ukusebenza phakathi kwabantu besithathu akunakugqitha koko kuvumelwa ngumthetho; Umlamli wentengiselwano uya kuqhubeka nokubakho, kuba akukho nto itshintshayo ngaphandle kwesiqinisekiso sokhuseleko esikhoyo. IBlockchain inyusa ukhuseleko kwezomthetho, kodwa ayinciphisi amaxesha okuthengiselana ukuba iimeko zomthetho zokutshintsha inkqubo ye-notarial esekwe kwizenzo ziyayithintela; Kwaye ayizinciphisi iindleko zokuthengiselana ukuba isixhobo sobuchwephesha sinemiqobo yokufaka iOfisi yangaphambili ekufikeleleni komsebenzisi ngendlela e-agile okanye ukuba isithuba sokungena kwi-Intanethi kwiindawo ezisemaphandleni sisabanzi kakhulu, kancinci kakhulu ukuba amandla amagqwetha ngaphezulu Ukuveliswa kwezinto ezintsha kwenziwa kwenkqubo yokuchwetheza kunye nenkcazo yeekhosi / imigama phantsi kobuchule begqwetha.
Nangona kunjalo, iBlockchain linyathelo elikhulu. Ngokuqinisekileyo iya kuba yitekhnoloji eya kuthi ivumele iphupha lomnye wabacebisi bam, onethemba lokuba umthengi kunye nomthengisi ebhankini baya kubeka umnwe wabo kwiminwe yokufunda kwaye benze ukuthengisa. Ngokobuchwephesha inokwenzeka loo nto, kodwa inemigaqo yezomthetho, ukuthembakala kwabasebenzisi kwidatha kunye neemeko zokutshintsha indlela abacinga ngayo abantu… baya kwenza ummangaliso ovela ezulwini okanye kurhulumente onemikhwa yobuzwilakhe ubuncinci kwiminyaka engama-25 eqhubekayo.
I-Bitcoin linyathelo elilandelayo, lokukhusela kunye nokusetyenziswa kwemali ye-cryptographic. Oku kuya kuba yinto eya kunciphisa inani labalamli. Kodwa ngenxa yoko, inde indlela yokuhamba; ngakumbi kuba ingumxholo ngaphezulu kwetekhnoloji, yezoqoqosho, ifuna umthetho wengingqi kunye nexesha, nto leyo eza kuvumela abasebenzisi ukuba bayiqonde kwaye bayamkele. Ukunciphisa abalamli yinto enokwenziwa ngaphandle kweBitcoin, kanye njengokuba ilizwe laseMbindi Merika lingenzi nje ngokudlulisela kwiBhanki ukubhaliswa kwempahla ebambekayo, ukuyandisa okanye ukuyikhulula; isenzo esenziwe ng notary ngendlela yakudala, ngamaphepha kwifolda etyheli; Ewe kunjalo, kunye nabathunywa abanjengoko banikwe i-notary kunye nokusikelwa umda koxanduva phakathi kokholo olulungileyo lomthengi, ukholo lwe-notarial kunye nobhaliso lukarhulumente. Ukusuka koku kuguqulwa ipropathi, ukuhambisa, ukuthengisa okanye ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ube ngamaxabiso… kuninzi okulahlekileyo.
Kodwa kuyakwenzeka. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba iFactom ne-Epigraph zifezekise iiprojekthi ezibonakalayo, ngakumbi hayi kwihlabathi lesithathu.
Ukunyaniseka, ndilula kakhulu kuba umda phakathi kweBlockchain neBitcoin ayikho loo nto; kunokwenzeka ukwenza kuphela ngeBlockchain kakhulu ngaphandle kokuba uphumelele kwiBitcoin.
Kwimeko yeli lizwe likuMbindi Merika ekubhekiswa kulo kwinqaku lephephancwadi, into enayo ngoku yiprojekthi yokulinga, apho kuvavanywa itekhnoloji yeBlockchain. Ngayo yonke into eqinisekileyo kwiminyaka emi-4 iya kuba yinyani eqinisekisiweyo malunga nohlobo olutsha lweRegistry yeNkqubo eNobumbano, ethi ngokweenkcukacha zayo ithi kubuchwephesha obungasebenziyo ukuba le nkqubo kufuneka isebenzise ubuchwephesha bokubethela ngemixokelelwano nakwezokhuseleko. I-Bitcoin ikwezinto zethu ezicinga ukuba iminyaka engama-25 lixesha elifutshane.
Okwangoku kwintetho, endiyishwankatheleyo kuphela, amantombazana ayeqengqeleka amehlo nge-margarita yesibini. Baye bagqiba ukuphakama bayokubona iziqhushumbisi ezazibonakaliswe emanzini eThames, bevumela umbono wendlela ababonakala ngayo oonokrwece ... kanye xa siqala ukuthetha ngendlela iBlockchain enokusetyenziswa ngayo kulawulo lwe-cadastre enokuthi ngokulula yenza ukuba kube nzima kakhulu kwimiceli mngeni yovavanyo olukhulu lwe-cadastral novavanyo olusekwe kwiimeko zentengiso.